न”चाहँदा-नचा’हँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो’ भन्दै गायिका टिका सानुले लेखिन् मा’र्मिक स्टा,टस ! – Ap Nepal
न”चाहँदा-नचा’हँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो’ भन्दै गायिका टिका सानुले लेखिन् मा’र्मिक स्टा,टस !
इन्द्रेणी का’र्यक्रमले आयो’जना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै टिका’ सानुले इन्द्रेणी कलाकार नभई चल्दैन भने पछि सामाजिक संजाल उनको त्य’स्तो भना’ईको कोहि सहि त कोहि गलत बुझि’एको पाईएको छ ।
टिका सानुले इन्द्रेणी कार्यक्रम बा’ट चलेको होइ’न म आफै चलेको हो भने पछि का’र्यक्रममा कृष्ण र सा’नू बिच चर्का’चर्की भएको हो।
आफ्नो गा’यन प्रतिभाले गर्दा चा’डै सामाजिक संजा’लमा तातिन त सफल भईन् तर उनले ला’ईभ कार्यक्रममा सस्थाको कुरा मा विवाद हुने कुरा बोल्नु नहुने थीयो भनेर सामाजिक संजाल मा टिका टिप्पणी भईरहेको छ ।
यसी बिष’यमा गायिका टिका सा’नुले आफ्नो सामा’जिक संजाल फेसबुक स्टाटस मार्फत सम्बन्धित बिषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ :
नचाहँदा नचाहँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो। कार्यक्रम इन्द्रेणीसँग प्राय व्यक्तिहरु परिचित हुनु’हुनु हुन्छ। यस कार्यक्रमको गरिमा, चर्चा, परिचर्चा, विश्वास र यस कार्यक्रमको अभिया’नका बारेमा जति प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ। म त्यहि काम’गर्छु भन्दा झन् गर्व लाग्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियोको अंशलाई लिएर जुन चर्चा र मेरो आलोचना भइरहेको छ। यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ।
तर, त्यो भिडि’योमा सोझो रुपमा कार्यक्र’मका बारेमा परिचित थिएन भन्दा घमण्ड कसरी हुन्छ ? कुनै पनि संस्था र त्यसमा’आवद्ध कर्मचारीहरु एक’अर्कामा परिपुरक हुन्छन भन्दा के बिराए ?
मैले इन्द्रे’णीको कार्यक्र’मका क्रममा शहरदेखि गाउँव’स्तिका भिरपाखा धाएकी छु। २०औं जोर जुत्ता चप्पल फटाएकी छु। केही पाएकी छु, केही गुमाएकी छु। जुन प्रक्रिया चलि’रहने प्रक्रिया पनि हो।
मलाई आजको दिन’सम्म ल्याउनुमा इन्द्रेणी कार्यक्र’मले कुनै योगदान दिएको छैन भनेर कही भनेकी छु र ? कलाकार र संस्था’बीचको संम्बन्ध परि’पुरक हुन्छ भन्नु गलत हो ? खैर इन्द्रेणी कार्यक्र’मका सन्चालक आदरणीय दाजु कृष्णप्र’साद कँडेल ज्यु यतिखेर पुर्व इला’ममा हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ आउना’साथ यो विषयमा थप प्रष्ट पार्नेछौं।
साथै अर्को कुरा पूराना भिडि’यो काटेर पोस्ट गरेर मेरो चरित्र ह’त्या गर्ने, तनाव दिने, जातिय रंग दलेर गालि गर्नेहरु’लाई मेरो भन्नु केही छैन। सत्य बुझ्नलाई सचेतना चाहिन्छ। नोट: कृष्ण दाइ र मेरोबीचमा कुनै मतान्तर र मन मुटाव छैन।
Prevमुकेश अंबानी बने हजुरबा , फोटो सो;शल मिडिया बन्यो भा,इरल
Nextबिबाहपछि श्वेता खड्काको श्रीमान सहित परि’वारसँग “Exclusive” ग’फ, सासु र जेठानी साथी ज’स्तै (भिडि,यो सहित)
“पल शाह निर्दोष छन्, हामी बाट गल्ति भयो” पिडित गायिकाका बाबुले बयान फिर्ता लिंदै भने ..
बच्चाको मुखभित्र तालुतिर प्वाल परेको देखेपछी आत्तिँदै अस्पताल, वास्त विकता खुल्दा सबैले टा, उको ठोके
बिनाको साथिहरू रुंदै मिडियामा, त्यो दिन यस्तो सम्म भयको रहेछ , प्रेमीसँग रिसाएर हिडेकी थिइन बिना (भिडियो सहित)